सिल्लल्ट विशेषज्ञले तपाईंको वेबसाइट प्रदर्शनलाई कसरी सुधार गर्न वाल्वयोग्य एसईओ सुझाव दिन्छ
वास्तवमा, त्यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू छन् जब तपाईं विचार गर्नुपर्दछवेबसाइट सिर्जना गर्दैछ। निर्दिष्ट प्लगइनहरू प्रयोग गर्नको लागि पृष्ठहरू संरचनाबाट, सबै कुराले गर्दा तपाईंको माईक्रोसफ्टको पहिचानको लागि आउँछइन्टरनेट। यसबाहेक, यो तपाईंको ग्राहक / पाठकहरूको सन्तुष्टिको लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यी सबैसँग सही तरिकामा गर्न सकिन्छखोजी इन्जिन अनुकूलन (एसईओ) वेबसाइटहरूको कन्फिगर गर्नका लागि नियमहरूको मद्दत। खोजी आवश्यकताहरू बैठक गर्नाले तपाईंको वेबसाइट उच्च श्रेणीबद्ध हुन्छखोज परिणामहरुमा।
कठिनाइ, जुन धेरै कम्पनीहरू सामना गर्छ, त्यो खोज इञ्जिन होलगातार सुधार र आफ्नो एल्गोरिदम परिवर्तन गर्नुहोस् त्यसैले यो विशेषज्ञको काम चाहिन्छ, जुन नवीनतम समाचारको साथ अद्यावधिक छएसईओ क्षेत्र। ग्राहक सफलता प्रबन्धक को आर्टेम Abgarian सेमील्ट डिजिटल सेवाले तपाईंको वेबसाइटको कार्यसम्पादनलाई सुधार गर्न के गर्न सक्छ भनेर बताउँछ।
वेबसाइट को अनुकूलित गर्नुहोस
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको वेबसाइटमा हरेक तस्वीर अनुकूलित हुन सक्छ? हो,शीर्षक तपाईंले छवि र छविको आकार दिनुहुन्छ, सबै राम्रो SEO अभ्यास प्रतिबिंबित गर्न सक्दछ। तपाईं आफ्नो छविहरू अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई खोजी गर्न सक्नुहुन्छइन्जिन अनुकूलन अल-ट्यागिंग द्वारा प्रत्येक तस्वीर। जब खोज इन्जिनहरूले वेब खारेज गर्दछ भने, तपाईंको वेबसाइट छविहरू को भागको रूपमा फिक्स्ड गरिनेछपरिणामहरू। तपाईंको तस्विरको साइज घटाउँदा वेब लोडिङ गति बढाउन मद्दत गर्दछ जसले तपाईको वेबसाइट रैंकिंग सुधार गर्न सक्छ। छवि दिनुहोस्खोजशब्द-केन्द्रीय शीर्षक जसले ग्राहकहरूलाई उनीहरूको खोजी गर्दै जान्छ भन्ने पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
समाप्ति सामग्री ब्लक
तपाईंले कहिल्यै वेबसाइटमा क्लिक गर्नु भएको छ, केवल तपाईलाई आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाउनसाइटमा पहुँच गर्न तिर्नुहुन्छ? खैर, धेरै मानिसहरू त्यस्ता साइटहरू छोड्छन् र कहिले पनि फर्केर आउदैनन्। तपाईं आफ्नो वेबसाइट एक हुन कि चाहँदैन कि मानिसहरू छोड्न चाहँदैनन्तपाईंले तिनीहरू के प्रस्ताव गरिरहनुभन्दा अघि पनि! यदि तपाईं आफ्नो साइटको भाग राख्न चाहानुहुन्छ भने, शायद तपाइँको सब्सक्राइब्ड सदस्यहरूको लागि,त्यो भाग मात्र लक गर्नुहोस्। ल्यान्डिंग पृष्ठ नि: शुल्क छोड्नुहोस्। सबै अनावश्यक रूपहरू, र विज्ञापन डिटेक्टरहरू, साथै पपअपहरू हटाउनुहोस्। Source - kanger protank3mini cleaning brush.
खोजी इन्जिनहरू वेबसाइटहरूलाई उनीहरूको सामग्री अद्यावधिक गर्न नियमित रूपमा नियमित गर्न आवश्यक छउनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई विश्वसनीय र समयमै जानकारी प्रदान गर्न सक्छन्। जस्तै, वेबसाइटहरू जसले नियमित रूपमा आफ्नो सामग्री अद्यावधिक गर्न प्रयास गर्दछ,एल्गोरिदम द्वारा प्राथमिकता दिइएको छ। एक ब्लग भएको निश्चित छ कि तपाईंको वेबसाइट को लागि विचार बाट बहिष्कार गरिएको छैन सुनिश्चित गर्ने एक निश्चित तरिका होउच्च रैंकिंग।
राम्रो URL शीर्षकहरु चुन्नुहोस
तपाईंको यूआरएल खोज इन्जिन अनुकूलन गर्नुहोस् जुन तपाईले प्रस्ताव गरेको सेवा सहितURL मा, वा तपाईंको URL को लागि राम्रो नाम रोजेर। तपाईको यूआरएलमा स्थान वा भौगोलिक क्षेत्र सहित खोज इन्जिनहरू पनि मद्दत गर्न सक्दछतपाईंको ग्राहकहरु लाई आफ्नो वेबसाइट मा लिंक गर्न को लागि।
प्रसंस्करण मोबाइल अनुकूलन
संसारमा जो बढ्दै जाँदा मोबाइलमा छ, गुगलसँग अहिले नै विशेष छमोबाइल अनुकूल वेबसाइटहरूको लागि एल्गोरिदम। यस कारणको लागि, तपाईको वेबसाइटलाई मोबाइल फोनको लागि अनुकूलित हुनुपर्छ वा दण्डित हुने जोखिम हुनुपर्छ। तपाईंकोवेब डिजाइनर मोबाइल फोनका लागि उपयुक्त उत्तरदायी वेब डिजाइन चयन गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। एक अकसर गरेमा प्रश्न खण्ड समावेश गर्न नबिर्सनुहोस्जो कि आवाज आधारित खोजहरु को रुचि को लागि।
लोड हुँदैछ स्पीड फास्ट
जब सबैले भन्यो र गरे, तपाइँको वेबसाइटको लोडिङमा काम गर्न नबिर्सनुहोस्गति। मानिसहरूको ध्यान प्रायः लामो छैन, र त्यसैले यदि तपाईंको वेबसाइटले सधै लोड गर्न लिन्छ भने, मौकाहरू तपाईले धेरै धेरै गुमाउनु भएको छ।ग्राहकहरू तपाई भन्दा सोच्नु भन्दा। यो कारण हुन सक्छ कि तपाइँको वेबसाइट को रूप मा राम्रो तरिकाले बदलन को रूप मा यो चाहिए। सबै कुरालाई विचार गर्नुहोस्जुन सम्भावित तपाइँको साइटलाई कम गर्न सक्छ, प्लगइनहरूबाट सामाजिक मिडिया साझा बटनहरू, र छविहरूको आकार पनितपाईंको पृष्ठ।
पृष्ठ लेआउट र डिजाइन महत्त्वपूर्ण हुँदा, नबिर्सनुहोस् कि SEO होसबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारक जसले तपाइँको वेबसाइटको प्रदर्शनलाई प्रभाव पार्छ। को अनुभव मा रेखाचित्र सेमील्ट ग्राहकहरू, एसईओलाई तपाइँको मा उपेक्षा गर्दैकार्य प्रकृयाले तपाइँको कम्पनीको मार्केटिंग प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ।